३ दिनदेखि भोकै रहेका भाईको टाउकोमा समस्या उपचार पनि हुने भोयो । थेरापी मेसिन किन्नका लागि शिशिर भण्डारी लागि परे, बाँकी (भिडियो सहित) – Ap Nepal
३ दिनदेखि भोकै रहेका भाईको टाउकोमा समस्या उपचार पनि हुने भोयो । थेरापी मेसिन किन्नका लागि शिशिर भण्डारी लागि परे, बाँकी (भिडियो सहित)
अक्सिजनसहित उपचार गर्नुपर्ने कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि अस्पतालहरु समस्यामा परेका छन् । उनीहरुले अक्सिजन अभावकै कारण बिरामी उपचार गर्न नसक्ने स्थिति आएको सार्वजनिक रुपमै बताएका छन् । किस्ट मेडिकल कलेजका अपरेटिङ अफिसर अमिश पाठक अक्सिजन अभावले जुनसुकै बेला ‘डिजास्टर’ हुन सक्ने बताउँछन् । २०० बेडको क्षमता भएपनि अक्सिजन अभावले बिरामी भर्ना गर्न नसकेको उनको दाबी छ ।
यसैबिच राजधानीमा एक कोठामा दुई दाजुभाईहरु ३ दिनदेखि भोकै अवस्थामा रहेपछि शिशिर भण्डारीलाई फोन गरेका छन् । शिशिरले कोठमा पुगेर भाईहरुको अवस्था बुझे र आफ्नो तर्फबाट सहयोग पनि गरे । कोठामा पुग्दा भाई केहि समय अगाडीदेखि नशााको बिरामी रहेको बुझिएको छ । यसबचमा शिशिर भण्डारीले प्राप्त सहयोग रकमहरु संकलन गरेर नरेन्द्र सुनारको उपचारका लागि एक थेरापी मेसिन किनिदिने भएका छन् ।
यस अघि नै भाईको उपचार प्रयाश भएको रहेछ, डक्टरको अनुसार उनको पुर्ण उपचार सम्भव छैन, केवल थेरापीकै माध्यमबाट अवस्थामा सुधार आउँछ । डाक्रटको सल्लाह र उनलाई यसअघि उपचार गराएका दुर्गा नाथ दाहाल जीसँगको कुराकानी पछि हामीले यो निर्णय गरेका हौं, शिशिरले बताए
यसैबिच राजधानीमा एक कोठामा दुई दाजुभाईहरु ३ दिनदेखि भोकै अवस्थामा रहेपछि शिशिर भण्डारीलाई फोन गरेका छन् । शिशिरले कोठमा पुगेर भाईहरुको अवस्था बुझे र आफ्नो तर्फबाट सहयोग पनि गरे । कोठामा पुग्दा भाई केहि समय अगाडीदेखि नशााको बिरामी रहेको बुझिएको छ । यसबचमा शिशिर भण्डारीले प्राप्त सहयोग रकमहरु संकलन गरेर नरेन्द्र सुनारको उपचारका लागि एक थेरापी मेसिन किनिदिने भएका छन् । यस अघि नै भाईको उपचार प्रयाश भएको रहेछ, डक्टरको अनुसार उनको पुर्ण उपचार सम्भव छैन, केवल थेरापीकै माध्यमबाट अवस्थामा सुधार आउँछ । डाक्रटको सल्लाह र उनलाई यसअघि उपचार गराएका दुर्गा नाथ दाहाल जीसँगको कुराकानी पछि हामीले यो निर्णय गरेका हौं, शिशिरले बताए (भिडियो हेर्नुस)
Posted in अन्तरवार्ता, भिडियो
Prevप्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमु क्त भएको केहि घण्टामै राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा यस्तो बिज्ञप्ति हेर्नुहोस्
Nextआमाको मुख हेर्ने दिन रवी लामीछानेले आफ्नी आमाको तस्वीर सार्वजनिक गर्दै लेखे यस्तो भावुक पोस्ट
रमेश प्रसाईं र नन्दा बिहेपछि यसरी देखिए मिडि,यामा,काठमांडू आएर सीधै आश्रम पुग्दा भाबु,क बने-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
दुई नि, र्दाेष सैनिक भरतपुर का, रागारबाट छुट्दा जे देखियो-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
आज घट्यो सुनको मुल्य, कतिमा भयो त कारोवार ?
पिल्स: कस्ता म’हिला हरुले प्रयोग गर्न सक्छ’न् ? कहिले खाने र कसरी गर्भ रहन दिं,दैन ? (33703)